के प्रियंकालाई फिल्मको अफर छैन ? « Mazzako Online
के प्रियंकालाई फिल्मको अफर छैन ?
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले २ वर्ष अघिको समय संझिइन् भने पनि उनलाई आफैदेखि लोभ लाग्न सक्छ । हरेक दिन सिनेमाको छायांकन, एक दिन खाली बस्न नपरेको अवस्था । प्रियंका भाग्यमानी अभिनेत्री थिइन् । सिनेमा नचलेपनि उनलाई लिएर सिनेमा बनाउन निर्माताले छाडेनन् ।
किनकी, प्रियंका सबैसँग काम गर्न सहज थिइन् । तर, अहिले प्रियंकालाई सिनेमाको अफर नै छैन । उनको हात खाली खाली छ । प्राय नम्बर १ स्थानमा पुगेका अभिनेत्रीहरुले एक दशक सिनेमा क्षेत्रमा दबदबा कायम गरेका छन् । तर, प्रियंका आधा दशकमै सेलाइन् ।
यसको मुख्यकारण, उनले सिनेमामा काम गर्न नजान्नु नै हो । उनी, अभिनित सिनेमा लक्का जवान रिलिजको तयारीमा छ । यो सिनेमामा उनी मुख्य अभिनेत्री हुन् या आइटम गर्ल, खुलेको छैन । उनी अभिनित एउटा यस्तो प्रेम कहानी रिलिज हुने टुंगो छैन । सिनेमा हेल्लो जिन्दगीको पनि कुनै टुंगो छैन ।
प्रियंकालाई उनका नजिकका मानिएका विकासराज आचार्य, दीपकराज गिरीले फिल्ममा लिन छाडिसकेका छन् । के प्रियंकाको फिल्मी करिअर पुरै ओरालो लागेकै हो त ?